သက်ကြီးရွယ်အိုများ - princetoncovid.org
Princeton ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်၊ စည်ပင်သာယာ Princeton နှင့် Princeton ပြည်သူပိုင်ကျောင်းများ၏လူထုပူးပေါင်းမှု။ အတည်ပြုထားသောသတင်းအချက်အလက်။ ယုံကြည်ရသောသတင်းရင်းမြစ်။
မြို့တော်ဝန်၏နေ့စဉ် update ကို
အဆိုပါ Stackey အပြင်
Virtual Events တင်ပြချက်များ
Virtual ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေး & အလုပ်အကိုင်
သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်စိတ်ချရသော - အစီအစဉ်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည် အဆက်အသွယ်မရှိသောအစားအစာဖြန့်ဝေမှု.
virtual မူလစာမျက်နှာသူငယ်ချင်းများ ပရိုဂရမ် - PSRC ၀ န်ထမ်းများသည် Princeton သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဖုန်းသို့မဟုတ် webcam ဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
Neighborhood Buddy Initiative - စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် Princeton သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဒီမှာ။ သင့်အားကူညီမည့် Neighborhood Buddy နှင့်တွဲဖက်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ပါ ဒီမှာ.
Virtual Fireside Chat - ညနေ ၂ နာရီတွင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များအစည်းအဝေးများကိုချုံ့သည်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကြိုးဖြင့်တဆင့်စကားပြောနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပါ ဒီမှာ။
ဖုန်း "drop-in နာရီ" M, W, F, 609-987-8100, ext 0; ဖွဲ့စည်းမှုကို virtual ထောက်ခံမှုအုပ်စုများ, 609-987-8100, ext ။ 117 သို့မဟုတ် အီးမေးလ်က; တစ် ဦး ချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ medicaid၊ ဆေးကုသမှု၊ အာမခံမရရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံအများစုကိုလက်ခံခြင်း (အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းပူးတွဲငွေပေးချေခြင်း)၊ 609-987-8100, ext 102. Drop-In Hours၊
အခြားနိုင်ငံမှအငြိမ်းစားဆရာဝန်များ / ဆရာဝန်များလိုအပ်
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်အငြိမ်းစားယူထားသောဆရာဝန်များသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများမှဆရာဝန်များအားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤအမိန့်သည် COVID-19 စောင့်ရှောက်မှုအားကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်လက်မှတ်ထိုးနိုင်သည် ဒီမှာ။ အမိန့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဆေးပညာလေ့လာမှုတွင်ကျောင်းသားများလိုအပ်သည်။
Princeton ၏ဝိဇ္ဇာကောင်စီသည်ဒေသခံများအ ၀ တ်အထည်များတင်ပို့ရောင်းချခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်လက်ကိုဆပ်ရန်ပဏာမခြေလှမ်းကိုကမကထပြုသည်။ သငျသညျထည်ဖြတ်ရန်, သို့မဟုတ် / သို့မဟုတ်ချုပ်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ပြီးစီးသောမျက်နှာဖုံးများကိုသူတို့လိုအပ်နေသူများအတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက